အခြားသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကိရိယာများ - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်
သင်ကအခြားသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကိရိယာများကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါကညစ်ညမ်းဆေးဖြတ်ခြင်းခရီးကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါ၊ အခြားသူများ၏အတွေ့အကြုံများမှသင်အကျိုးရယူနိုင်ပါသည်။
"ရဲရင့်ခြင်းကဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ခွန်အားမရှိ - သင်၌ခွန်အားမရှိသည့်အချိန်တွင်ဆက်ဖြစ်နေသည်။ "
သငျသညျအထဲကဖြစ်ခြင်းနှင့်လူဦးန်းကျင်ကိုသုံးပေမယ့်အဖြစ်ဝေးလူမှုရေးအပြန်အလှန်ဝင်အဖြစ်တော်တော်လေး nonthreatening ဖြစ်ကြသည်ရနိုင်သည့်နေရာများအများကြီးရှိပါတယ်။ ထွက်ဆွဲထားနှင့်တစ်ဦးစာကြည့်တိုက်သို့မဟုတ်စာအုပ်ဆိုင်မှာဖတ်, ဒါမှမဟုတ် Starbucks ကတစ်ခုသို့မဟုတ်ပန်းခြံခုံတန်းရှည်တစ်ခုမဂ္ဂဇင်းယူပါ။ သို့မဟုတ်ပဲကြာမြင့်စွာပြင်ပတွင်သွားလာယူပါ။ ငါသည်ဤကဲ့သို့သောအလေ့အကျင့်ပစ္စည်းပစ္စယအောင်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ခေါင်းကိုများထဲကငါ့ကိုရဖို့ကူညီပေးသည်ငါ့ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးပိုငျကဲ့သို့ခံစားရစေသည်ကိုရှာပါ။
နောက်တစ်ဆင့်မှာသင်ကြည့်နေသောလူများကိုကြည့်ပြီးပြုံးပါ။ ထို့နောက်ကုန်တိုက်ကြီးသို့မဟုတ်သင့်ကျောင်းဝင်းပတ်လည်၌လမ်းလျှောက်သောအခါအမျိုးသမီးများနှင့်မျက်လုံးချင်းဆုံပါ။ ထို့နောက်မျက်လုံးချင်းဖြင့်ပြုံးပါ။ ထို့နောက်“ ခင်ဗျားတကယ်ကြည့်ကောင်းနေတယ်” စသည့်စကားမပြောသည့်“ မက်ဆေ့ခ်ျ” ကိုခေါင်းညိတ်။ စဉ်းစားနေသည်။ ထို့နောက်အနည်းငယ်အားအပြုံးဖြင့်“ ဟီ” ဟုပြောပါ။ ကဂိမ်းတစ်ခုလုပ်ပါ။ သင်သည်သင်၏“ ရမှတ်” ကိုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းတိုးတက်စေနိုင်မနိုင်စမ်းကြည့်ပါ။
ဆက်သွယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးရိုးဗီဇ ဦး နှောက်ကိုသက်သာစေရန်နှုတ်ဖြင့်ပြောစရာမလိုပါ။ ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပေါင်းသင်းမှုက dopamine နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဟန်ချက်ညီစေရန်ကူညီပေးသည့် oxytocin ကဲ့သို့သောအခြား“ ကောင်းသောခံစားမှု” အာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းများကိုထုတ်လွှတ်သည်။
ကွန်နက်ရှင်ကနေအကျိုးအမြတ်အလွန်မှန်ကန်အသုံးအနှုန်းများပေါ်လာမှာ။ ဥပမာ, မိတ်ဖက်နှင့်အတူ HIV ပိုးလူနာအသက်ပိုရှည်များနှင့်လျော့နည်းလျှင်မြန်စွာအေအိုင်ဒီအက်စ်ဖွံ့ဖြိုး။ ဒဏ်ရာများအထီးကျန်မှုတွေနှိုင်းယှဉ်ပါကအဖော်နှင့်အတူနှစ်ကြိမ်အဖြစ်အစာရှောင်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ။ အိမ်ထောင်သည်များအကြားနွေးထွေးသောထိတွေ့စိတ်ဖိစီးမှုအမျိုးမျိုးအတိုင်းအတာလျော့ကျစေပါတယ်။ သို့သျောလညျးကိုအနီးကပ်ချိတ်ဆက်မှုအများဆုံးလေးနက်တဲ့လက်ဆောင်တွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သည်။ အနီးကပ်စိတ်ခံစားမှုဆက်သွယ်မှုစွဲခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါ၏အောက်ပိုင်းနှုန်းထားများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ သူတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိမိတို့အသိကျားကန်ခြင်းနှင့်စာနာမှုနှင့်လူမှုရေးဖြစ်နိုင်သောအောင်, အအာရုံကြောပုံစံများနှင့်သူတို့အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသောသူတို့၏အမျိုးအဦးနှောက်ဓာတုဗေဒပြောင်းပေးပါ။
လူသားတွေဟာကအနည်းဆုံးမကွာသည်, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းညှိလို့မရပါဘူး။ တိုက်ပိတ်ခံရအတွက်အကျဉ်းသားများမကြာခဏရူးသွားပါ။ အထီးကျန်သည့်အခါတစ်နည်းမှာ, စိုးရိမျသို့မဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကျခံစားရရန်ပုံမှန်ပါပဲ။ ဖိလိပ္ပုသည်ဂျေ Flores ကိုသတိပေးအဖြစ် တစ်ဦးနှောင်ကြိုး Disorder အဖြစ်စွဲ"နှောင်ကြိုးများကိုမယ့်အကောင်းတစ်စိတ်ကူးမျှမက, ဒါကြောင့်ပညတ္တိကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ "ဒါဟာလည်းဂြိုလ်ကမ်းလှမ်းအကောင်းဆုံးကိုကျန်းမာရေးအာမခံအချို့ဖြစ်ပါတယ်။ connection မဟုတ်ရင်စိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုခံအားစနစ်အားနည်းသွားနိုင်သည့်, ဟော်မုန်း cortisol ကိုလျော့ချကူညီပေးသည်။ "ကျနော်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုထိန်းညှိကူညီပေးဖို့ရှိပါတယ်တစ်စုံတစ်ဦးရှိပါကဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်အများကြီးလျော့နည်း wear နဲ့မျက်ရည်ရဲ့" ဟုအဆိုပါထဲမှာစိတ်ပညာရှင် / အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် James A. Coan ကရှင်းပြခဲ့သည် New York Times ကို.
ပြန်လည်ထူထောင်အသုံးပြုသူများအပယ်သွားသူတို့ရဲ့လေ့ကနေသူတို့ရဲ့အာရုံကိုအတင်းလိုက်တဲ့အခါ "ကယ်ဆယ်ရေး" မိမိတို့အကျိုးကို circuitry ပျော်မွေ့၏အခြားသတင်းရပ်ကွက်များအဘို့အလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုသည်။ ပထမဦးစွာအစဉ်အဆက်ကိုထပ်ကောင်းသောခံစားမြော်လင့်စရာမရှိပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာအဲဒါကိုရှာတွေ့မှတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသဘာဝဆုလာဘ်ကိုတွေ့: ဒီတော့ထွက်ဖော်ရွေအပြန်အလှန်, အစစ်အမှန်အိမ်ထောင်ဖက်, သဘောသဘာဝအတွက်အချိန်, လေ့ကျင့်ခန်း, အောင်မြင်ခြင်း, တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်။
သင်ကပြန်လည်နာလန်ထူမှုလုပ်ငန်းစဉ်အရှိန်မြှနှင့်အခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုကလာသောသဘာဝ neurochemical ဆုလာဘ်ရတဲ့စတင်နိုင်ပါသည်။ ထွက်ရောက်ရှိဖို့။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူလူမှုရေးအချိန်ကြီးလှ၏။ ကြောင်းပျက်ကွက်:
တနင်္ဂနွေတိုင်းငါ့မိဘတွေမှာကုန်ဆုံးခဲ့တယ်။ ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရုံနှင့်သူတို့နှင့်အချိန်ဖြုန်းခဲ့သည် ငါကပုံမှန်အားဖြင့်တီဗီကိုမကြည့်ဘူး၊ ထို့အပြင်ငါ့အစ်ကိုလည်းမရှိ, ဒါသူနှင့်အတူထွက်ဆွဲထား။ နှင့်နောက်ဆုံးပေမယ့်ကျိန်းသေအနည်းဆုံးမိသားစုခွေးဖြစ်ပါတယ်။ သူကချစ်ခင်တွယ်တာမှုကိုတကယ်သိတယ်။ ငါသူ့ကိုငါ့မျက်နှာကိုလျက်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ သူကကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။
သင်တစ်ဦးခြေလှမ်းဝေးတဲ့ယူနိုင်ပါတယ်လျှင်မူကားကြည့်ရှု: သင်ဘယ်လိုကောင်းသောနယ်နိမိတ်နှင့်အတူအချို့သောကျန်းမာထိရနိုင်မလဲ? မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူချိန်းခြေလျင်နှိပ်နယ်? သင်သည်သင်၏လက်မောင်းပတ်ပတ်လည်ထားနိုင်ပါတယ်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူရုပ်ရှင် Watch? တစ်ဦး snuggle ရဲ့ buddy နဲ့ညဉ့်ကိုလွန်စေ? ဝေစု မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူဤဆောင်းပါးကို ဘာသာရပ်စကားဖြစ်သည်။ တဦးတည်းကောင်လေး said:
ငါ၌အကျိုးကျေးဇူးရှိသောသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိသော်လည်းအကျိုးကျေးဇူးများမှာသူမကတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်လာကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်ကြည့်နေသည့်အချိန်၌ရှုပ်နေသည်။ သူမဟာအပျိုစင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူမရဲ့သမိုင်းကြောင်းအရလိင်ဆက်ဆံဖို့ဘယ်တော့မှမသင့်တော်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါလိင်ဆက်ဆံဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖိအားပေးတာကိုမလွှတ်ပေးဖို့ငါအရမ်းလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့်ငါက porn နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ED ကိုတီထွင်တုန်းကငါလိင်ဆက်ဆံနိုင်ဖို့ငါ့ရဲ့လိင်တံကိုခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားဖို့အမြဲကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင်ငါလိင်ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်၏လွှတ်ပေးရန်သင်ယူနေကြသည်။ အတိတ်တုန်းကငါ့ကိုစိတ် ၀ င်စားဖို့စိတ် ၀ င်စားသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်၏နေရာတွင်ရှိနေပါကကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းလိင်ဆက်ဆံရန်လိုက်ရှာလိမ့်မည်။ ယခုမူငါသည်ငါပဲအနားယူခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ငါစကတည်းကအလွန်ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်လူမှုရေးအရအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မရဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကိုပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးအားနည်းချက်များသည်အဘယ်နေရာတွင်ရှိနေကြောင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုပြင်ဆင်ရန်ဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရှုခဲ့သည်။ လူတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာဖို့ဘယ်လောက်လွယ်ကူတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်၊ သူတို့ဟာပုံမှန်စာသင်ကျောင်း၊ ချာ့ချ်၊ ဝါသနာတူအုပ်စုတွေစတဲ့နေရာတွေမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်အခုတော့ငါအုပ်စုလိုက်အနေနဲ့ဆွဲနေတဲ့အခါသင့်လျော်တဲ့အချိန်မှာမှတ်ချက်တစ်ခု (သို့) နှစ်ခုကိုလုပ်လိုက်တယ်။ အခြားသူများကတုံ့ပြန်ကြသည်။ နောက်နေ့မှစပြီးသူများကိုနှုတ်ဆက်တယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့အဲဒီမှာရှိသူအားလုံးနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမိပြီးကျွန်တော့်ကိုသူတို့သူငယ်ချင်းလို့သတ်မှတ်သူတွေရှိပါတယ်။ လွယ်ပါတယ် ထိုအဟုတ်, ငါသည်လည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအများဆုံးသဘာဝအရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းများကိုရှာဖွေသည်။ အချစ်မဟုတ်ဘူး အရာအားလုံးအရပျ၌လဲကြလိမ့်မည်။ permalink
မနက်ဖြန်မှ စ၍၊ သင်သည်သင်၏အကြွေးဝယ်ကဒ် (သို့) ငွေသားကိုရှာဖွေရန်လှည့်စားနေမည့်အစားသင်ငွေပေးချေရန်အချိန်ရောက်သောအခါကော်ပိုရေးရှင်း၊ စပျစ်သီးပျဉ်ဘူးတစ်ဘူး၊ gadget အသစ်တစ်ခုသို့စတိုးဆိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဆိုင်တစ်ခုတွင်တစ်ခုခုဝယ်ရန်သွားတိုင်း၊ ငွေရှင်းကောင်တာကိုကြည့်ပြီး“ ခင်ဗျားနေကောင်းလား”
ပြီးတော့သူတို့ဖြေဖို့စောင့်ဆိုင်း။ သူတို့ထဲကအများစုဟာကောင်းတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ် (ငါတို့အားလုံးလိုသလို) ။ လူအနည်းငယ်ကသူတို့ဖောက်သည်ကဒါလုပ်မှာကိုအရမ်းကြောက်လွန်းလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဖြေမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ကောင်းသောလမ်းအတွက်အံ့အားသင့်။ လူအများစုကသူတို့ကိုသင်အမှန်တကယ်အသိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတာကိုပြုံးပြီးတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။
ငါမိုက်မဲတယ်၊ မိုက်မဲတယ်၊ ဒါပေမယ့်လွယ်ကူပြီးမကြာခင်မှာမင်းကမင်းကိုလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ ရှက်ကြောက်ခြင်းစတဲ့ပြhaveနာတွေနဲ့ကြုံလာရင်မင်းဒါကိုလုပ်နိုင်မှာကိုအံ့အားသင့်မှာပါ။
ငါသည်လူနှင့်လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုအကြောင်းကိုဒီသီအိုရီရှိသည်။ အများစုမှာယောက်ျားပြုပါမိန်းမကဲ့သို့မိမိတို့၏လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုမဖွံ့ဖြိုးပါဘူး။ သူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူထွက်ဆွဲထားစဉ်အမျိုးသမီးများယောက်ျားလေးများနှင့်အခြားမိန်းကလေးတွေအကြောင်းပြောနေတာ, အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်း၎င်းတို့၏လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်အတူစတင်ပါ။ ထိုအတောအတွင်းမှာတော့ကြောင်းအသက်အရွယ်မှာယောက်ျားလေးပဲကွန်ပျူတာဂိမ်းများနှင့်အားကစားကစား။ ဆိုလိုသည်မှာယောက်ျားသည်မိန်းမအဖြစ်လူမှုရေးအရအဖြစ်ကျွမ်းကျင်ဖြစ်လာရန်လိုလားပါလျှင်သူအချို့နောက်ပိုင်းအသက်အရွယ်မှာတက်ဖမ်းပါဘူးဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
သို့သော်ယောက်ျားအများစုသည်အမျိုးသမီးများနှင့်ချိတ်ဆက်လေ့ရှိသည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းတို့နေထိုင်သောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများမှတဆင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုံခြုံပြီးအလိုအလျောက်နီးပါးရှိသည်။ သင်၏လူမှုရေးစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရန်နှင့်မည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိဘဲသူစိမ်းများနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုနိုင်သည့်အချက်နှင့်မတူပါ။ ငါသိသည်အတိုင်း, ယောက်ျားအနည်းငယ်သာသာအမှန်တကယ်ထိုကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုများတမင်တကာလုပ်ဆောင်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ငါဒီအပေါ်အတော်လေးအချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်။ ဒီပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ယောက်ျားတွေ၏ကောင်းတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါလမ်းပေါ်မှာလူချဉ်းကပ်ပါဝင်သည်သောအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ငါပထမ ဦး ဆုံးရိုးရှင်းသောမေးခွန်းများ (“ မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မည်သို့သွားနိုင်မည်နည်း”) ကိုပထမ ဦး ဆုံးမေးမြန်းခဲ့ရသည်၊ ထို့နောက်နောက်ကြောင်းရာဇ ၀ င်အနည်းငယ်နှင့်မေးခွန်းများနောက်ဆုံးတွင်စိတ်ကူးယဉ်မိန်းကလေးအတွက်အတွင်းခံအဝတ်အစားနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသမီးများအားအကြံဥာဏ်တောင်းခဲ့သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သူစိမ်းများကိုချဉ်းကပ်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့်မည်သည့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုမှကင်းလွတ်ပြီးအမှန်တကယ်အားကြီးသောခံစားမှုပေးသည်ဟူသောအချက်နှင့်သင်အကျွမ်းတဝင်ရှိသည်။ နောက်ဆုံးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုစက္ကန့် ၃၀ အတွင်းမှာကျွန်မမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်။ သူမမှာရည်းစားရှိတယ်လို့ပြောခြင်းကိုသူငြင်းဆန်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကအရေးမကြီးဘူး၊ ငါပြောခဲ့တာကတကယ့်ပေါက်ကွဲမှုပဲ။
သို့တိုင်“ ချဉ်းကပ်မှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှု” ဟုခေါ်သည်မှာဘယ်သောအခါမျှပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုငါပြောနိုင်သည်။ ဒီလှပတဲ့အမျိုးသမီးကိုမင်းတွေ့ပြီး“ လူမှုရေးအရနွေးထွေးမှု” မရတဲ့အခါမင်းဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘဲသော့ခတ်ထားပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ မနေ့ကတောင်မှတောင်မှ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မရိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။
နွေးရန်သူစိမ်းအချို့နှင့်စကားပြောပါ။ သူစိမ်းများသည်လှပသောအမျိုးသမီးများမဖြစ်သင့် (ဖိအားပေးမှု) ။ ကောင်းပြီ၊ ဟင့်အင်း၊ ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုမျှဝေချင်တဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့စကားပြောရတာပိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ ဤအရာသည်သင့်အားလူမှုရေးအရပိုမိုသက်သောင့်သက်သာရှိစေမည့်စိတ်ဓာတ်ကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ထိုအခါသင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောအတွေးအခေါ်တစ်ခုနှင့်ပေါင်းသင်းသည်။
ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူများနှင့်လည်းဆက်သွယ်မှုပြသနာများရှိသည်၊ ၎င်းသည် porn နှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်။ ငါဘာကြောင့်ဆက်သွယ်ရတာဘာကြောင့်အခက်အခဲရှိသလဲဆိုတာကိုရှာဖွေဖို့အတွက်အချိန်အနည်းငယ်ကုန်ဆုံးခဲ့တယ်။ ငါစုဆောင်းထားသည့်အရာမှတစ်ခုသည်အခြားသူများနှင့်မည်မျှကောင်းကောင်းချိတ်ဆက်နိုင်ကြောင်းအချက်သုံးချက်ရှိသည်။ ၎င်းနှစ်ခုကလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
ပထမ ဦး စွာယေဘုယျလူမှုရေး 'စွမ်းရည်' ။ အချို့ကဤ EQ ဟုခေါ်ကြသည်။ ၎င်းသည်သူတစ်ပါးနှင့်မည်မျှကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံနိုင်ကြောင်း၊ စကားပြောဆိုသူများ၏ကောင်းခြင်း၊ အခြားသူများ၏အတွေးအမြင်ကိုမည်မျှထိထိရောက်ရောက်လွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းစသည်ဖြင့်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြသည်။ သို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုများစုဆောင်းခြင်း။ လူတစ် ဦး သည်လူမှုရေးအရထွက်ခွာသွားသောမိသားစုမှမွေးဖွားလာပြီးနောက်တွင်အလွန်လူမှုရေးအရထွက်ခွာသွားသည့်မိတ်ဆွေများရှိပါက၎င်းတို့သည်အလွန်အစွန်းရောက်သောကိစ္စရပ်များ မှလွဲ၍ လူမှုရေးအရလိမ္မာပါးနပ်လိမ့်မည်။ သူကပြောနေတာကတခြားသူတွေကိုပိုပြီးစကားပြောခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့လူမှုရေးစွမ်းရည်ကိုလေ့လာပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ သူတို့အခွင့်အလမ်းအားလုံးတွင်သူစိမ်းများနှင့်စကားပြောဆိုခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဒုတိယကတော့ Self-image ပါ။ ဒီဂျာနယ်ဆောင်းပါးကိုလေ့လာကြည့်ပါ -“ မင်းကိုအခြားမကြိုက်တာကိုယုံတာဒါမှမဟုတ်မနှစ်သက်တာ - ယုံကြည်ချက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အပြုအမူများ” ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရကျပန်းလူတစ် ဦး က၎င်းတို့ကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်ဟုတစ်စုံတစ် ဦး ကယုံကြည်လျှင်၊ ဤသူစိမ်းနှင့်စကားပြောဆိုပြီးနောက်တစ်စုံတစ် ဦး သည်ထိုလူကိုအမှန်တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကျပန်းပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုကြိုက်ခဲ့သည်။ သူတို့ကမကြိုက်ဘို့အလားတူရလဒ်များကိုပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့် ၄၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကလုပ်ဆောင်ခဲ့သောအချို့သောအခြေခံမူများအပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။ ထိုတွင်ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံသောပရောဖက်ပြုချက်များရှိသည့်လူများ၏စိတ်ကူးတည်ရှိပြီးထိုလူတို့သည်ဤပရောဖက်ပြုချက်များကိုကြိုးစားအကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မည်ဟူသောအတွေးကိုတည်ဆောက်ထားသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကူညီမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုတည်ဆောက်ထားတာလို့ထင်ပါတယ်။ ဒီတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိပုံရိပ်ဟာလည်းအဓိကကျတဲ့အပိုင်းကပါဝင်တယ် လူတစ် ဦး သည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ခြင်းသည် (မိမိကိုယ်ကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်မှုမြင့်မားခြင်း) သည်လူတစ် ဦး အား၎င်းတို့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်မှု၊ ပိုမိုလေးစားမှုရှိခြင်း၊
ကျွန်ုပ်အတွက်နောက်တစ်ဆင့်မှာဤအရာများကိုကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်စတင်လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ တူသောအရာများ - ကျွန်ုပ်သည်ဖော်ရွေသူ၊ နွေးထွေးသောသူဖြစ်သည်ဟုခံယူခြင်း။ ; အခြားသူများကကျွန်ုပ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အနေဖြင့်အမှန်တကယ်ကြိုက်သည်ဟုယုံကြည်ခြင်း၊ လူတွေကိုယေဘုယျအားဖြင့်ဖော်ရွေခြင်းနှင့်နွေးထွေးသောအဖြစ်ကိုမြင်ခြင်း။ ဒါကကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအဆိုးမြင်အတွေးတွေကိုပြောင်းပြန်ပြောင်းပစ်လိုက်တာပါ။ ဤအရာများသည်အပြန်အလှန်အားဖြင့်သီးသန့်မရှိကြပါ။ တ ဦး တည်း၏အလိုဆန္ဒတိုးတက်ခြင်းသည်အခြားတစ် ဦး ၏ဘဝနှင့်အခြားဘဝကဏ္willများတွင်တိုးတက်မှုရှိစေမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
porn သည်ပြaနာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ထိုအရာများကိုတိုးတက်ရန်အခွင့်အလမ်းများမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ငါသည်အခြားသူများနှင့်ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံရန်သင်ယူခြင်းတွင်လူတစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်၏ကြီးထွားမှုကိုနှောင့်နှေးစေသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသောအခါကျွန်ုပ်သည်လူမှုရေးအရနည်းသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနိမ့်ကျပြီး Self-image သည်ညံ့ဖျင်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ (အနည်းဆုံးသူစိမ်းများနှင့်အတူ) အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်အမှန်တကယ်မကောင်းမွန်ဟုဆိုလိုသည်။ ယင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလျော့နည်းစေ။ ကျွန်ုပ်အား porn သို့ဆွဲဆောင်သွားသည်။ သံသရာတစ်ခု။
တတိယတဦးတည်းတစ်ခါတစ်ရံအခြားသူတစ်ဦးနှင့်သဟဇာတမဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါသည်ဤရှားပါးကြောင်း, တစ်ဦးခင်မင်ရင်းနှီး, ယုံကြည်မှုလူတစ်ဦးလျှင်ပြဿနာဖြစ်ကောင်းသူတို့ပင်ဖြစ်သည်ထင်ပါသလဲသော်လည်း။ Plus အားတစျခုဒီအကြောင်းလုပျနိုငျဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကိုလုပ်ပါ။ ဒါဟာလူမှုရေးဖြစ်မရှိပါ။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတစ် ဦး အားဖုန်းခေါ်ပါ။ အဲဒါတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်စာပို့ပါ လမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့သာလမ်းလျှောက်ပါ သင်ကော်ဖီဆိုင်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်စာအုပ်ကိုလူများကြည့်ကြသည်သို့မဟုတ်ဖတ်ကြသည်။ သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါ။ သငျသညျလူမှုဆက်သွယ်ရေးဖို့နေသားတကျမရှိသေးလျှင်, နှေးနှေးယူပါ။ သင်သည်အမြဲတစေပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းမပြုနိူင်သော်လည်းလူအများစုနှင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်နိုင်သည် - အများပြည်သူနေရာ၊ ပြတင်းပေါက်ဆိုင်သို့သွားခြင်း၊ Best Buy သို့သွားပြီးနည်းပညာအသစ် / ကွန်ပျူတာ / စသည်တို့ကိုစမ်းကြည့်နိုင်သည်။ အဲဒီမှာထွက်ဘာကိုကြည့်ပါ။
သင်တက်ရောက်သည့်အမျိုးသမီးများနှင့်တူညီသည့်အတန်း၏အဓိကအကြောင်းအရာရှိသည့်အတန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အုပ်စုသို့တက်ရန်စဉ်းစားဖူးပါသလော။ ၎င်းသည်စကားစမြည်စတင်ခြင်းမှအဆင်မပြေမှုကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ယောဂ၊ ရိုင်ကီ၊ ဆာဆဆာ၊ သီချင်းဆိုခြင်း၊ တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်ငါးသလောက်အကများကဲ့သို့သောအတန်းများသည်များသောအားဖြင့်အမျိုးသမီးများနှင့်ပြည့်နှက်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့မိန်းမတွေကိုဒီလိုကြိုက်တဲ့ယောက်ျားတွေကိုမကြာခဏစိတ်ဝင်စားတယ်။
ဒီမှာငါလုပ်နေတာ။ ငါ့မှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရတယ်။ ဆိုလိုတာကငါဖုန်းနဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ကတစ်ဆင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မယ့်အစားသူတို့ကိုလူကိုယ်တိုင်တွေ့လိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းကကျွန်ုပ်ကိုဖျော်ဖြေပွဲသို့မဟုတ်စာဖတ်ခြင်းသို့ဖိတ်ကြားပါကကျွန်ုပ်သည် (အကုန်အကျများသော်လည်း) သွားပါမည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်သည်ဤမြို့တွင်နေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်သောတီထွင်ဖန်တီးသူများနှင့်ပိုမိုတွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါသည်လည်းငါ့အိမ်မှထွက်ခြင်းအပေါ်ကိုပိုမိုအလုပ်လုပ်သွားမယ်။ ငါ့မှာလက်တော့ပ်တစ်လုံးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါကငါ့အိမ်ကလွဲလို့တခြားနေရာတစ်ခြားနေရာမှာစာရေးခြင်း၊ ငါ၌လူနှင့်တွေ့ရန်ချစ်သောချစ်စရာခွေးတစ်ကောင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သူ့ကိုပန်းခြံများသို့ခေါ်ဆောင်။ စကားစမြည်စပြောနိုင်သည်။
သင်၏မြို့သို့မဟုတ်ဒေသအတွက် Meetup.com ကိုရှာဖွေပါ၊ သို့မှသာသင်နှင့်တူသောအကျိုးစီးပွားရှိသောအုပ်စုများကိုသင်ရှာနိုင်သည်။ ငါကဆက်ပြောနေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါမြို့မှာ Cosplayers / Anime ပရိတ်သတ်တွေအတွက် Meetup အဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်၊ ​​ဘာလို့လဲဆိုတော့လောလောဆယ်တစ်ခုမရှိသေးဘူး။
စီးပွားရေးဌာနအချို့ဖြစ်သောဘဏ်ခွဲ၊ စူပါမားကတ်၊ ကော်ဖီဆိုင်၊ စာတိုက်သို့ပုံမှန်လည်ပတ်ခြင်းကဖော်ရွေသောအကျွမ်းဝင်သောသူစိမ်းများနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာစကားစမြည်ပြောနိုင်သည့်လူမှုရေးအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုများကိုသင်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
သငျသညျမှာလူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုသငျခနျးစာယူနိုငျ www.charismaarts.com နှင့် www.succeedsocially.com.
ဒါ့အပြင်အောက်က tools တွေကိုစဉ်းစားပါ။
Cuddle လုပ်ပြီး Buddy ကွန်ယက်
ကခုန် Classes ရဲ့နဲ့ဒုတ်
Learn / အွန်လိုင်းဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ပေး